Shiinaha AUDI Qaybaha Gawaarida laalista Bushing 7L0505323A Soosaarka iyo Warshadda | Jiachuang
Khadadka Waxsoosaarka otomaatiga ah ee horumarsan
Guga Caleenta Iveco
Nooca Trailer Nooca Xilliga Guga
AUDI Qaybaha Gawaarida Laalista Bushing 7L0505323A
Shiinaha Saaraha saaraha AUDI Qaybo ka Car auto hakinta ...
Fasalka 10.9 ubolt guga caleen
Mawduuca caadiga ah ee loo yaqaan 'bolt' guga caleemaha
24T Gawaarida culus ee ganaaxa qayb kamid ah guga caleen
OEM 1-51130-961-0 gaari xamuul caleen boodboodka ISUZU
Agaasimaha Suuqgeynta: Allan
Maamulaha Suuqgeynta Mareykanka: Cathy
Maamulaha Suuqgeynta Asia & Oceania: Wendy
Maareeyaha Suuqgeynta Afrika & Bariga Dhexe: Peter
Maamulaha Suuqgeynta Euro: Oyuna
Qiyaasta (mm) (Dhererka * ID * ID)
NR + 35 # bir
Waxaan soo saari karnaa noocyo kaladuwan oo duurjoogta ah, xoqidda naxaasta ah, bustaha naxaasta ah, birta birta ah (10 # tuubada la jiiday), qashin biametal ah (20 # bir + QSn6.5-0.1), duurka isku dhafan (NR + 35 # birta), Dhirta Polyoxymethylene , Nylon bushing.
Alaabooyinkayagu waxay xakameynayaan tayo sare leh xariiqda wax soo saarka ee horumarsan, Waxaan ku jirnaa boos wanaagsan oo kaliya inaan ku siino qiimo tayo sare leh oo qiimo leh, laakiin sidoo kale tan ugu fiican adeegga iibka kadib, injineerada si fiican u tababaran ayaa ku siin doona wixii taageero farsamo ah.
Waxaan ka helnay shahaadada ISO9001, badeecadeenu waxay ka heshay jawaab celinta alaabada macaamiisheena.
Amarada tijaabada yar ayaa la aqbali karaa, muunad ayaa la heli karaa.
Ma Samaysan Karnaa Alaabo Kale?
Injineeradeenna iyo shaqaalaheennu waa xirfad iyo khibrad. Sawirada, sawirada ama macluumaadka kale ee aad na siiso, waxaan sameyn karnaa qaabka ka dibna soo saari karnaa alaabada kugu habboon.
Adeeg noocee ah ayaan qabannaa?
Naxariis Kahor Adeegga
Haddii aadan aqoon u lahayn badeecadaha, waxaan soo aragnay injineero khibrad leh oo ku bari doona sida loo isticmaalo loona ilaaliyo alaabooyinka, si ay kuugu sharxaan habka wax soo saar ee wax soo saarka.
Kooxda Iibinta Khibrada Leh
Xubnaha iibkeenu dhammaantood waa kuwo si wanaagsan u tababaran oo khibrad leh, waxay si fiican u yaqaanaan ganacsiga caalamiga ah, markaa waad ka xoroobi kartaa dhibaatooyin badan.
Dammaanad hal sano ah oo laga helo dhammaan badeecadaha waxaa lagu bixiyaa shirkadeena. Haddii aad wax su'aal ah ka qabto wax soo saarka, waxaan ku siin doonnaa adeeg waqtigiisa ku habboon.
Waxaan xirfad ku leenahay xakamaynta tayada iyo soo saarida maaraynta. Waxaan dadaal ugu jirin inaan ku siino alaab aad ufiican
Q1: Sidee ku saabsan MOQ ee Bushing?
A: 500pcs midkiiba.
Q2: Mudo intee le'eg ayey noqon doontaa waqtiga dhalmadaada?
A: 10-30 maalmood markii la helo deebaajiga
Q3: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta ee la aqbali karo?
J: TT iyo LC araga
Q4: Waa maxay xirxirida?
A: Xirxirida gudaha: 1pc / bac caag ah, xirxirida banaanka: Nadaafad caadi ah + santuuqa alwaax, ama xirxirida shuruudahaaga.
Hore: Soo-saaraha Shiinaha ayaa keenaya AUDI Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Xiga: ISUZU Qaybaha Gawaarida laalista Bushing 8-94408841 TFR
Toyota Hakinta NR Bushing 12362-11300B
Tayo Sare Toyota Hakinta Rubber Bushing
Bushksa Hakinta waarta ee qaybaha Toyota
ISUZU Qaybaha Gawaarida laalista Bushing 8-94408841 TFR
Waxaan bixinaa Toyota Hakinta Wadajirka Bushing
MITSUBISHI ganaax Rubber Bushing 2913NA-010
Si diirran u soo dhowee macaamiisha adduunka oo dhan inay soo booqdaan warshadeenna si ay u dhisaan xiriir iskaashi.